रथ यात्राको झल्को दिने गरी विराटनगरमा कांग्रेसको विजयी र्‍याली
सेतोपाटी संवाददाता विराटनगर, असार २५
दोस्रो चरणको निर्वाचन तथा प्रदेश नम्बर १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरमा विजयी भएको नेपाली काँग्रेसले आज भव्य विजय जुलुस निकालेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा मुलुकका मुख्य २ महानगर काठमाडौं र पोखरामा पराजयको पीडा बोकेको नेपाली कांग्रेसले विराटनगरको महानगरपालीको मेयर तथा उपमेयर नै आफ्नो पोल्टामा पारेपछि नेपाली काग्रेस विराटनगरले रथ यात्राको झल्को दिने गरी विजयी र्‍याली निकालेको हो।
विराटनगर महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखसहित ७ वटा वडाध्यक्षमा विजय हासिल गरेपछि यसको खुशीयालीमा आइतबार बिहानैबाट निस्किएको जुलुसले विराटनगर परिक्रमा गरेको थियो।
विजय जुलुसमा कांग्रेसबाट मेयरका विजेता भीम पराजुली, उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित केन्द्रीय सदस्यहरु डा. शेखर कोइराला,डा. मिनेन्द्र रिजाल, रामहरि खतिवडा,पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, अमृत अर्याल लगायत नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
शहिद रङ्गशालाबाट निकालिको विजय जुलुस विराटनगरको मुख्य बजार हुँदै रानी भन्सार जोगबनी पुगेर पुन आदर्श विद्यालयमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
नव निर्वाचित मेयर तथा उपमेयर लगायत अन्य पदाधिकारीलाई बधाई र माला अविर लगाईदिनेको सर्वसाधारणको ठूलो सभागिता थियो । आजको विजय उत्सव र्‍यालीमा ठूलो संख्यामा निस्किएको र्‍याली देखेर विराटनगरमा निकालिने राधाकृष्ण रथ यात्राको झझल्को आएको सर्वसाधारणले बताएका छन्।
शनिबार सम्पन्न भएको मतगणनाबाट काँग्रेसबाट मेयरका उम्मेद्वार भएका भीम पराजुलीले एमालका विनोद ढकाललाई ५७१० मतान्तरले पराजित गरेका थिए । विराटनगरमा यसअघिका स्थानीय निकायको चुनावमा कांग्रेस पराजित भएको थियो । २०४९ सालको चुनावमा एमालेका रमेशचन्द्र पौडेल र भुराज राई मेयर तथा उपमेयर बनेका थिए । पहिलो पल्ट स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसले आफ्नो गुमेको साख जोगाएको खुसियालीमा नेता-कार्यकर्ताहरु एकअर्कामा बधाइ र शुभकामना बाँड्दै विजय र्‍यालीमा सहभागी भए।
तस्वीरः पुष्पराज थपलिया
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार २५, २०७४, ०५:३४:५१